Meel ku keydi Google Play: Waxay kuu sheegi doontaa barnaamijyada aad tirtiri karto | Androidsis
Google Play ayaa kaa caawin doona inaad keydiso booska adiga oo sheegaya barnaamijyada aadan adeegsan
Arrinta boosku had iyo jeer waa mid ka mid ah welwelka ugu sarreeya ee isticmaalayaasha. In kasta oo awoodda keydinta ee taleefannadu si aad ah kor ugu kacday, haddana waa mawduuc xasaasi ah. Gaar ahaan maadaama isticmaaleyaal badani ku rakibaan tiro badan oo codsiyo taleefanka ah. Laakiin, waxay umuuqataa in Google Play uu la imaado xal macquul ah.
Thanks to cabirka cusub ee iman doona, isticmaaleyaasha ayaa laga yaabaa inay sida ugu dhaqsaha badan ku iloobaan barnaamijyada kaa caawinaya inaad iska fasaxdo booska. Maaddaama habkan cusubi ballan-qaadayo inuu wax badan ka fudud yahay. Maxay ku saabsan tahay Google Play ayaa kuu sheegi doona barnaamijyada aadan adeegsan.
Markaa marka hore, waxaa laga yaabaa inaysan wax badan kuu sheegin, waa shaqo naga caawin doonta inaan aragno inta boos ee keyd lagu heli karo. Sidaas darteed, in la tirtiro wax kasta oo ka hadhay oo kaliya ku fadhiya booska hab aan waxtar lahayn taleefankeenna. Sidan, maadaama ay jiraan hal codsi ama in kabadan oo aadan isticmaalin haba yaraatee, tirtir. Sidaa darteed, waad keydin kartaa booska.
Fikradda Google Play waa inay ku tusto booska lagu keydin karo ee taleefankaaga ku jira. Mar alla markii ay ku tusaan macluumaadkan oo aad aragto inay boos yartahay, waxay ku siinayaan dalabyo taxane ah oo aadan isticmaalin ama aadan isticmaalin muddo dheer. J) Haa, waad sii wadi kartaa inaad tirtirto.
Waa a Muuqaal si loo sii daayo booska Google Play uu hadda tijaabinayo. Fikraddu waxay ahaan lahayd in lagu dhex daro menu-ka codsiyada iyo ciyaaraha. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad aragto wax walba oo lagu rakibay qalabkaaga. Xaqiiqdii mid hab aad u fudud oo lagu banneeyo booska qalabka.
Hadda tiro kooban oo adeegsadayaal ah ayaa tijaabinaya muuqaalkan. Waxaa la filayaa inaysan waqti dheer qaadan doonin in lala gaaro inta kale ee isticmaaleyaasha ah, laakiin taariikh lama sheegin. Marka waa arrin la sugo. Laakiin, waa war wanaagsan in la arko taas Google Play wuxuu soo bandhigayaa qalab caawimaad markay tahay xakamaynta booska la heli karo taleefanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google Play ayaa kaa caawin doona inaad keydiso booska adiga oo sheegaya barnaamijyada aadan adeegsan